Sharkoon Shark Mpaghara H40, anyị nwalere ejiji egwuregwu eji ejiji | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na egwuregwu vidio ma chọọ iwere nzọụkwụ ahụ ka ị nwee asọmpi, ma na ọgbakọ ndị ahụ niile ma ọ bụ ozugbo gị na ndị enyi gị na-egwu egwuregwu n'ịntanetị, ị nwere ike ịmaraworị ọnụahịa nke ihe ndị ahụ niile ndị ọkacha mmasị gị na-eji nwee. Eziokwu bụ na mgbe ha ruru ọkwa ụfọdụ, ụlọ ọrụ ndị ahụ n'onwe ha na-ahapụ ihe ndị a dị oke ọnụ iji kpọsaa ụdị ha. N'ịhapụ nke a n'akụkụ, obi abụọ adịghị ya na ịdị mma nke isiokwu ndị a na-adịkarị mma, ọ bụ ezie, ọ bụkwa eziokwu na, ruo taa, ọ naghị ewe nnukwu ego ahụ iji nwee anụrị.
Ana m ekwu nke a n'ihi na, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'oge dị anya gara aga ụkpụrụ nduzi ahụ bụ na ego anyị mefuru ogo ngwaahịa anyị nwetara dị mma karịa bụ eziokwu, taa ihe agbanweela n'ụzọ dị ịrịba ama ebe ọ bụ na, na ọtụtụ ụdị ndị ọzọ n'ahịa Ahịa ahụ na-adịkarị mma Ọ na-adịkarị na, ọ bụrụ na ịchọọ, ị nwere ike ịchọta ngwaahịa ndị na-enye ogo nrụpụta mara mma na ọnụahịa dị ala karịa ngwaahịa dị elu. Nke a nwere ike bụrụ kpomkwem na nke ọhụrụ Sharkoon Shark Mpaghara H40, ekweisi egwuregwu na anyị nwere ohere ịnwale maka izu ole na ole na nke ahụ, ọ bụrụ na ị sonyere anyị, anyị ga-enyocha nke ọma.
2 Gịnị bụ Sharkoon? Mara a obere mma ụlọ ọrụ n'azụ imewe na rụpụta nke ndị a egwu egwuregwu ekweisi
4 Anyị na-enyocha Sharkoon Shark Mpaghara H40, ekweisi na-apụta maka ịdị mma na ogo ha
6 Sharkoon Shark Mpaghara H40 isi ihe na ihe ngosi
7 Ihe onye editọ kwuru na isi egwuregwu Sharkoon Shark Mpaghara H40
Gịnị bụ Sharkoon? Mara a obere mma ụlọ ọrụ n'azụ imewe na rụpụta nke ndị a egwu egwuregwu ekweisi
Nkọ bụ ụlọ ọrụ na Amụrụ na 2003, n'oge nke ndị ndu ya kpebiri ịbanye n'ahịa kọmputa desktọọpụ site na ịnye ọtụtụ ngwaahịa dị elu nke ga-ekesa na ugbu a nnukwu netwọkụ zuru ụwa ọnụ. N'ime ọrụ ndị kachasị amasị nke ụlọ ọrụ ahụ lekwasịrị anya, gosipụta ihe atụ imewe na imepụta nke kọmputa dị elu, azịza nchekwa dị n'ime na mpụga dị egwu ma, dịka ọ dị, ekweisi emepụtara ma ndị ọrụ na-egwu egwu na kọmputa na kọmputa na-achọ ihe ngosi dị egwu.
N'ileghachi anya na weebụsaịtị nke Sharkoon, ụlọ ọrụ ahụ na-emesi obi ike na ha na-elebara ma ha anya mmepe n'ụzọ nke ngwaahịa ọ bụla dịka imewe nke otu na-enweghị efunahụ mkpa nke ndị ahịa ha ebe ọ bụ na, dị ka ọmụmụ nke ha si dị, ndị ọrụ taa ọ bụghị naanị na-eche maka njirimara teknụzụ nke otu ngwaahịa nyere, mana ugbu a, a na-elebara ụdị njirimara ndị ọzọ anya dị ka O nwere ike ịbụ ike ịrụ ọrụ ma ọ bụ etu ngwaike ha zụrụ dị jụụ bụ mgbe ha na ya na-arụ ọrụ ma na-achọ ikike ya niile.
Anyị na-enyocha Sharkoon Shark Mpaghara H40, ekweisi na-apụta maka ịdị mma na ogo ha
Dika enwere ike ihu na onyonyo a, aghaghi ighota na ihe ngosi nke Sharkoon Shark Mpaghara H40 ka egosiri na a igbe mechiri emechi nke ahụ agaghị ekwe ka ị hụ ihe ọ bụla n'ime. N'ezie, dị na igbe ahụ, ị ​​gaghị ama ma ị na-ele okpu agha, dị ka ọ dị, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Ihe ịchọ mma na odo na-acha odo odo nke igbe ahụ dị egwu, ihe m masịrị m nke ukwuu ma na-ebute gị ka ị rụọ ọrụ na ngwaahịa dị mma.
Ozugbo anyị mepere igbe ahụ, n'ime anyị, anyị ga-ahụ kpọmkwem ihe anyị na-achọ, ụfọdụ okpu agha okpu nke zuru oke na onye na-ejide plastik, akpa njem, ihe ị ga - achọ mgbe niile iji were gị kpuchido Sharkoon ọhụrụ gị yana nkọwa nke anyị na - enweghị ike ileghara anya, ụdị ọnụ ụzọ kwụ ọtọ nke ime ụlọ gị ma ọ bụ ebe egwuregwu gị nwere ozi ka onye ọ bụla ghara inye gị nsogbu mgbe ị na-emikpu onwe gị na egwuregwu gị.
Sharkoon Shark Mpaghara H40 isi ihe na ihe ngosi
Nkọwapụta nke dọọrọ uche m, ọkachasị mgbe ị wepụla okpu agha ahụ site na igbe ya dị egwu wee malite 'hu ya n'anya'ma lelee ya ebe niile, ọ bụghị naanị na ọ na-adị mma ka aka, mana ọ na-apụkwa ịbụ ezi pụtara ìhè nakwa dị ka mara. Isi ihe ọzọ dị na ihu ọma ya, ma ọ dịkarịa ala maka m, bụ na Sharkoon nyere ụdị ihe atụ a a otutu padding ma na mpaghara nke ntị na elu akụkụ, ihe na njedebe sụgharịrị gaa nkasi obi ka ukwuu mgbe ị na-arụ ọrụ okpu agha a.
Dị na ntị aka ekpe ebe anyi huru igwe okwu, nke a na-etinye na ụdị nkwado nke na-enye gị ohere ijikọ ma kwụpụ ya ngwa ngwa mgbe ọ dị mkpa. Kpamkpam na a ekweisi anyị na-ahụ eriri USB. Eriri a na-anọchi anya ogologo ya, anyị na-ekwu maka mita 2, yana maka agba agba ya na-adọrọ adọrọ. Karịa ma ọ bụ obere n'etiti eriri anyị na-achọta otu njikwa njikwa, dị ka iji bulie ma ọ bụ wetuo olu ma ọ bụ gbanye igwe okwu ma gbanyụọ ya. Na njedebe nke eriri anyị nwere njikọ atọ, USB nke na-enye ìhè iji kpughee okpu agha ahụ, yana ntọala stereo 5 2 mm bụ nke na-ahụ maka inye ndụ ma igwe okwu na ekweisi.
N'ime na ekweisi na-onwem na Ndị ọkwọ ụgbọala 50mm dị n'ime iko ndị na-ebute ụda nke ezigbo mma ebe ọ bụ na bass ahụ dị mma, oge dị n'etiti etiti ahụ doro anya yana ọbụlagodi dị elu nwere ike ịmasị gị ọ bụ ezie na, n'ezie, ọ dị anya na ogo nke nhọrọ ndị ọzọ dị oke ọnụ karịa nke dị n'ahịa. A nkọwa anyị nwere ike pụta ìhè dị na igwe okwu, nke nwere ike ịmepụta olu doro anya na-enweghị, na ụkpụrụ, mgbagha ma ọ bụ oke ụda olu.
Ihe onye editọ kwuru na isi egwuregwu Sharkoon Shark Mpaghara H40
Nyochaa: Juan Luis Arboledas
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na na mbụ, n'amaghị ụdị ika ahụ ebe ọ bụ na enwebeghị m ohere ịnwale ekweisi ha na-egwu egwu, ekwesịrị m ikwupụta na Sharkoon Shark Mpaghara H40 nwere ike ịbụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta okpu ọhụụ na-enweghị etinye nnukwu ego. Onwe m nwere mmasị na ụfọdụ nkọwa dịka nkasi obi ha mgbe ị na-eji ha na imewe.
Na usoro nke sonido, belụsọ na ị bụ ezigbo ọkachamara n'ọhịa ma chọọ ka gị na ndị kacha mma na-arụ ọrụ na ahịa, maka nke ị ga-etinye nnukwu ego, n'ezie ị ga-enwe ihe ijuanya karịa ihe ụdị ụdị okpu agha a na-enye. Ọ bụ eziokwu na ha nwere ike ọ gaghị adị ọnụ ala, ebe ọ bụ na anyị na-ekwu maka ụdị ihe ahụ ihe dị ka euro 50 n'ahịaAgbanyeghị na ọ nwere ike ịbụ karịa ihe na-atọ ụtọ, mara mma yana, karịa ihe niile, itinye ego na-adịgide adịgide.
General ghọtara àgwà
Njikwa ndị a dị ezigbo mkpa
Arụghị arụ ụda
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Sharkoon Shark Mpaghara H40, anyị nwalere ekweisi egwuregwu eji ejiji